Factory ABRASIVE, mpamatsy - mpanamboatra China ABRASIVE
Tifitra vy boribory karbaona avo lenta
Ny tifitra vy misy gazy karbonika avo lenta, vita amin'ny vy manokana, mafy fo sy mora tezitra, manana atiny amin'ny karbaona mihoatra ny 0,85% .amin'ny fizotran'ny fikajiana atomika, sombin-javatra boribory vita amin'ny vy anidina. Fengerda mifehy fatratra ny rohy famokarana rehetra, indrindra ny fifehezana ny deoxidation sy ny decarboniza
Ny tifitra vy ambany karbaona dia misy karbaona, fosforôra ary solifara kely noho ny tifitra vy mahery. Noho izany, ny firafitry ny mikraoba anatiny mitifitra karbaona ambany dia malama kokoa. Ny tifitra vy ambany karbaona dia malefaka kokoa raha oharina amin'ny tifitra vy mahery.
Aluminium cut-wire shot (Aluminium Shot) dia misy amina marika aluminium mifangaro (4043, 5053) ary koa naoty alika toy ny karazana 5356. Ny naoty mifangaro azontsika dia miteraka elanelana B (eo ho eo amin'ny 40) ny hamafin'ny Rockwell raha ny karazany 5356 kosa dia hamokatra Rockwell avo Ny hamafin'ny b amin'ny faritra 50 ka hatramin'ny 70.
1. Manala tselatra hatramin'ny 0.20 ″ amin'ny fanariana maty nefa tsy manimba ny tampony
Mampihena ny akanjo sy ny triatra amin'ny fitaovana fipoahana
Manala ny loko sy ny firakotra hafa nefa tsy manimba ny tampon'ilay ampahany
Ny horonantsary zinc manify dia napetraka amin'ny ampahany vy mandritra ny tsingerina manome fiarovana ny harafesina mandritra ny fotoana fohy
Manolotra karazana kalitaon'ny Zinc Cut Wire Shots izahay. Misy amin'ny vidiny mahefa, ny vokatra entinay dia mampihena ny faharatrana sy ny triatra amin'ny fitaovana fipoahana. Ireo tifitra tariby Zinc notapatapahina ireo dia malefaka kokoa noho ny tariby vita amin'ny vy na vy vita amin'ny vy. Zinc notapahana tariby zinc misy amin'ny habe samihafa.
Ny famolavolana baolina fandefasana vy dia vita amin'ny vy boribory toy ny akora, izay zahana ara-batana amin'ny alàlan'ny teknolojia mihodina sy forging vaovao ary avy eo novokarin'ny teknolojia fitsaboana hafanana manokana.
Taorian'ny fanangonana traikefa nandritra ny taona maro ary fitsapana miverimberina,
Cut Wire Shot dia novokarina tamin'ny tariby avo lenta izay tapaka hatramin'ny halavany mitovy amin'ny savaivony. Ny tariby ampiasaina hamokarana Cut Wire Shot dia azo vita amin'ny Carbon Steel, Stainless Steel, Aluminium, Zinc, Nickel Alloy, Copper na metaly metaly hafa. Mbola manana ny zorony maranitra avy amin'ny fanapahana
Ny tifitra vita amin'ny vy notapahana vy dia karazana vokatra izay mampiasa ny fitaovana voaverina, ambany ny vidiny ary sarotra ny mamokatra vokatra avo lenta, io karazana vokatra io dia azo ampiasaina hanadiovana ny tampon-trano fotsiny. faritra ho an'ny mpanjifa izay tsy manana manokana
Grit vy vy angular avo lenta dia novokarina tamin'ny tifitra vy mahery. Tifitra vy izay potipotehina amin'ny endrika grit granular ary avy eo namboarina tamin'ny hamafin'ny telo (GH, GL ary GP) mba hikarakarana fampiharana hafa. Ny grit vy misy gazy karbonika dia be mpampiasa amin'ny haino aman-jery
Grit ambany vy angular vy vita amin'ny vy karbaona ambany
fitifirana. Tifitra vy izay potipotehina amin'ny grit granit. Malalaka ny kilema noho ny fitsaboana hafanana satria tsy ilaina ny fitsaboana fanampiny.